I-China High Temperature 6206ZZ I-Deep Groove Ball Bearing Manufacturer kanye Nomphakeli |Kunmei
Impilo ende, umsindo ophansi, izinga lokushisa eliphezulu
Ukushisa okuphezulu kwe-KM, mayelana nezinga lokushisa, inekhwalithi emibili, i-350 degress kanye ne-500 degress.I-500 degree beararing, inejubane elibili, i-150 rmp kanye ne-2000 rmp;inobuchwepheshe obubili, obujwayelekile kanye nobuchwepheshe be-SKF.
Ama-bearings amelana nokushisa okuphezuluIphrofayili:
Ukushisa okuphezulu okuthwala ukumelana nokushisa: okokuqala nokuyinhloko ukubekezelelana kokushisa okuphezulu.Kunezinhlobo eziningi, izinga lokushisa eliphezulu elithwala ngokuvumelana nezidingo ezahlukene, imvelo ehlukene, ingafaka izinhlobo ezahlukene zama-bearings.
Izinga lokushisa eliphezulue ukumelana nenqubo yesakhiwo kungahlukaniswa: ukumelana okuvamile kwesakhiwo ekushiseni okuphezulu okuthwala ukumelana nokushisa okuphezulu kanye nesakhiwo esikhethekile esithwalayo.
Izinga lokushisa eliphakeme lisetshenziswa kabanzi ku-metallurgy, i-oveni, ingilazi, imishini yokufafaza upende noma umthwalo wesithando somlilo kanye neminye imishini yokusebenza yokushisa okuphezulu.
● Ukungqubuzana okuphansi namazinga okushisa agijimayo, umsindo ophansi nokudlidliza
● Isivinini sokugijima esiphezulu
● Ikhwalithi ephezulu namandla okusebenza ohlelo lwakho lokusebenza
● Faka imithwalo ye-radial kanye nemithwalo ye-axial kuzo zombili izinkomba
● Itholakala ngezinhlobonhlobo zamafutha ezimweni eziningi, okuhlanganisa amafutha ekhwalithi yokudla, amafutha okushisa aphezulu kanye Nowoyela Oqinile.
● Ukwethenjelwa okwandisiwe kanye nokunikeza ukuphila okude nempilo yesevisi yokugcoba
Igama lomkhiqizo I-High Temperature 6206ZZ enebhola le-groove elijulile
Isakhiwo ukuthwala ibhola
Uhlobo ZZ, vula
Okubalulekile Insimbi ye-Chrome
Izinga lokushisa 500
Izici impilo ende, umsindo ophansi, izinga lokushisa eliphezulu
I-deep groove ball bearing ingasetshenziselwa ukudlulisa, izinsimbi, imishini kagesi, izinto zikagesi zasendlini, izinjini ezivuthayo zangaphakathi, izimoto zokuhamba.
Okwedlule: I-KM 22232CA Spherical Roller Bearing
Olandelayo: I-UCF211-32 I-Pillow Block Bearing